Kamera + inogadziridza kutora mafoto otomatiki patinonyemwerera | IPhone nhau
Kamera + inogadziridza kutora mafoto otomatiki patinonyemwerera
Munguva pfupi yapfuura tiri kuona kuti sei iyo smartphone yehondo inotarisana nemakamera ayo vagadziri vanogadzika paari. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo skrini uye zvimwe zvikamu zvehardware yemidziyo iyi zvakare ine kukosha kukuru, asi iyo Ini ndinotora mifananidzo iri nani kupfuura iwe ine kukosha kukuru kana zvasvika pakutaura kuti imwe smartphone iri nani pane imwe. Iyo fashoni yemifananidzo, kana kunyangwe iyo lens mbiri kuti ikwanise kutora zoom mapikicha nemidziyo idiki semafoni mafoni (izvo zviri pachena kuti haigone kuisa lenzi hombe), inogona kutigonesa kusarudza imwe kana imwe.
Kushanda-inodzorwa makamera inogadzira Hardware uye software kutamba pamwechete. Zviripachena Apple inogadzira yayo yemuno Kamera app iyo iyo inonyatsotora mukana kune ese mashandiro eiyo iPhone makamera, asi zvakare kune zvisingaperi zvekushandisa izvo zvinogona kutibatsira isu kutsikisa zvakatonyanya mikana yese. Camera + ndomumwe wavo, Anwendung anga aripo kwenguva yakareba uye achangobva ave kugadzirisa kuwedzera mabasa anonakidza nekuda kweIOS 11. Mushure mekusvetuka tinokuudza iwe ese nhau pakati payo iri, hongu, sarudzo ye tora mafoto otomatiki patinonyemwerera ...
Zviripachena iyi ndeimwe remabasa nyowani anozivikanwa, isu tinogona kanganwa nezve iyo timer kana uchitora mafoto otomatiki, zvakapusa muCuaZvidhure uye kunyemwerera neshamwari dzako, Kamera + ichaita iyo yekutenda nekutenda kwayo kutsva kwekunyemwerera. Uye kwete izvo chete, Camera + ikozvino inoita inotora muHEIF, iyo fomati nyowani yeApple mifananidzo (yakawanda mhando ine mashoma faira saizi), uye chii chinotonyanya kufadza: iyo mukana wekutibvumidza isu kugadzirisa mifanidzo inoparadzanisa iyo yakasviba kumashure zvimwechetezvo zvakasununguka.
Kubva pakuona kwangu ndeimwe yeakanakisa matatu-bato kunyorera kutora mifananidzo, iwe unogona zvakare kuzviita edza mahara nekutenda kune yayo yemahara vhezheni (zvimwe zvine mashoma asi izvo zvinogona kutiita kuti tifunge kuenda ku Checkout kuti uwane yakazara vhezheni). An app iri zvakare pasi rose saka unogona kuishandisa pane ako maPads. Saka usafunge kaviri uye edza kamera +.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kamera + inogadziridza kutora mafoto otomatiki patinonyemwerera
Piter Kupaka akadaro
Ndeipi ficha yakanaka yekuona kunyemwerera, Cherechedzo 2 ya2013 yakatoita, chii chichava chinotevera, kupenya?
Pindura Piter Kupaka
Iyo iPhone X inoonekwa muvhidhiyo ine itsva ine simba kumashure